Ungabubona kanjani ubudlelwane obunodlame? Discover ➡️ Thola ku-inthanethi ▷ ➡️
Ungabubona kanjani ubudlelwane obunodlame. Ubudlelwano obunodlame benzeka uma kukhona ukukhwabanisa noma ukuhlasela ukuze ulawule othile. Ngakho-ke, lapho kwenzeka khona, kuhle ukuphuma ebudlelwaneni obuhlukumezayo futhi ufune usizo. UNkulunkulu akafuni ukuba uphathwe kabi.
Ukuhlukumeza kungenzeka ezinhlotsheni eziningana zobudlelwano: phakathi kwamasoka, abashadile, abazali nezingane, izingane zakwethu, abangani, osebenza nabo … Ngokuvamile, amacala amabi kakhulu ubudlelwano obunodlame obenzeka ekhaya, phakathi kwamalungu omndeni. IBhayibheli liyakulahla konke ukuhlukunyezwa ngoba ukukhaphela uthando.
Ubudlelwano busebenzela ukunika ukuphepha, uthando nothando kulowo nalowo. Lapho ubudlelwane buba nodlame kunoma yisiphi isimo, umhlukumezi ukhaphela ukwethenjwa kwalowo ohlukunyezwayo. Ukuhlukumeza kuveza isivumelwano phakathi kwabantu futhi kuyisono.
1 Ungabubona kanjani ubudlelwane obunodlame ngokwebhayibheli
2 Ungabuxazulula kanjani ubudlelwano obunodlame ngokweBhayibheli
2.1 Xazulula ubudlelwano obunodlame uma kungumlingani wakho
2.2 Ungabuxazulula kanjani ubudlelwano obunodlame uma buphakathi kwabangane
2.3 Uma kwenzeka emshadweni wakho
2.4 Xazulula ubudlelwano obunodlame lapho ungaphansi kweminyaka yobudala
Ungabubona kanjani ubudlelwane obunodlame ngokwebhayibheli
Ungabubona kanjani ubudlelwano obunodlame Ubudlelwano obunodlame abulandeli imithetho yothando, inhlonipho nokwethembeka, okuyisisekelo sobuhlobo obunempilo. Ungaba ebudlelwaneni obunobuthi uma omunye umuntu elandela la maphethini alandelayo:
Te kulawula: Uhlala wenza lokho okufunwa yilowo muntu, noma ngabe uchaza ukuthi awufuni.
Sebenzisa ukukhwabanisa okungokomzwelo: Ukwenza uzizwe unecala ngakho konke noma ukuphoqa ukuba wenze okufunwa nguye.
Limelela kabi iqiniso: inguqulo yakhe ayihambelani kahle futhi uhlala eyiqhawe noma isisulu. Ungalokothi wenze iphutha.
Uyakululaza: uyakumemeza, uyathuka, usho izinto ezilulazayo ngawe, ngasese kanye / noma esidlangalaleni.
Ngikuhlasele: ikubamba kakhulu, ikushaye, ikhahlele, iphushe, iphonse izinto kuwe noma odongeni. Noma yiluphi uhlobo lodlame lwasemzimbeni.
Umuntu okuhlukumezayo uyayehlukanisa: Akakuthandi ukuhlangana nabanye abantu noma ukuxhumana nalabo obaziyo.
Umhlukumezi uyakwesabisa noma akusongele: usongela ukukushiya wedwa, ukuthi akekho umuntu ozokuthanda noma akusize, ukuthi ngaphandle kwakhe ngeke usinde, ukuthi uzothatha konke kuwe, ukuthi uzokulimaza noma akubulale, umuntu omthandayo noma ukuthi uzozibulala.
Kukulawula- Kubukeka sengathi udinga ukuvunyelwa kwakho kukho konke okwenzayo.
Ukuphoqa ukuthi uye ocansini: lapho uthi cha, kodwa lowo muntu uyakuphoqa. Ingabe mayelana ukudlwengula futhi kuyicala.
Uma kwenzeka noma iyiphi yalezi zinto, kuwuphawu lokuthi kukhona okungahambi kahle ebudlelwaneni futhi kufanele kushintshe. Uma uzizwa udidekile ngalesi simo, khuluma nomunye umuntu ngaso. Lapho ukusondelana kukukhulu, kulapho kudideka khona ubuhlobo obunobudlova. I- Ukubuka komuntu ongaphandle inkinga kungasiza kakhulu.
Ungabuxazulula kanjani ubudlelwano obunodlame ngokweBhayibheli
Into ebaluleke kakhulu ukunqanda ukuhlukunyezwa. UNkulunkulu akafuni ukuthi uphile ngaphansi kokuhlukunyezwa. Ubudlelwano obuhlukumezayo bungaba nemiphumela emibi kakhulu kuwe, njengokudangala, ukwesaba, ukwethuka, ukuphazamiseka kwemizwa, ukuzizonda, ukugula kwengqondo, ukulimala emzimbeni, noma ngisho nokufa kwakho noma ukufa somuntu othandekayo. UNkulunkulu akafuni lokhu ngempilo yakho! Lona ngumsebenzi kasathane.
Xazulula ubudlelwano obunodlame uma kungumlingani wakho
Uma unjalo ukuthandana nomuntu onodlame, Phula! Akufanele unikeze izincazelo. Phuma ebudlelwaneni manje, ngaphambi kokuba izinto zibe zimbi kakhulu. Akuyena umuntu ofanele ukukushada lo. Balekela isimo.
Ungabuxazulula kanjani ubudlelwano obunodlame uma buphakathi kwabangane
Uma ubuhlobo obunobuthi benzeka nabangani, zama ukunqamula ubudlelwano. Lokhu akusibo ubungani. Uma kwenzeka emsebenzini, bheka ukuthi isimo singalungiswa yini ngobuholi kanye / noma funa omunye umsebenzi. Ngisho nomsebenzi oholela kancane ungcono kunokuhlala kuleso simo.
Uma kwenzeka emshadweni wakho
Uma ukuhlukunyezwa kwenzeka ku Matrimonio, ezimweni ezingaphansi kakhulu, kufanele hlola ukuthi ngabe oshade naye uzimisele ukushintsha futhi ahlanganyele ekwelashweni. Uma kwenzeka i-ulaka noma ukusongela, phuma endlini, ngoba lo muntu angakulimaza noma izingane zakho.
Noma kungapheli ngesehlukaniso, isikhathi sokuhlukanisa singabaluleka kakhulu. Lokhu kuzokunikeza isikhathi sokululama ekuhlukunyezweni futhi ubeke izinto ngendlela efanele. futhi naye nikeza umhlaseli isikhathi sokubona amaphutha akhe futhi avume ukushintsha impilo yakhe (kepha qaphela, lokhu kungenzeka kungenzeki). UNkulunkulu ufuna okuhle kwakho, hhayi okubi. Ungazizwa sengathi kufanele uhlale nomhlukumezi.
Khumbula ukuthi ukuhlukunyezwa emakhaya kuyicala, ngakho-ke sincoma ukuthi ubikele lesi simo emaphoyiseni.
Xazulula ubudlelwano obunodlame lapho ungaphansi kweminyaka yobudala
Uma ukhona omncaneTshela umuntu omdala onokwethenjelwa ukuthi kwenzekani. Uma ukuhlukunyezwa kwenzeka ekhaya, khuluma nothisha omethembayo, iphoyisa noma esinye isiphathimandla. Awukweleti ukwethembeka kumhlukumezi, lo muntu akanalo ilungelo lokwenza lokho kuwe.
Kuzo zonke lezi zimo, ungakhohlwa: UNkulunkulu unawe. Uma uyisisulu sobudlelwano obuhlukumezayo, ubulungiswa UNkulunkulu usohlangothini lwakho. Thandaza kuNkulunkulu ufune usizo. Ungazikhulula ekuhlukunyezweni, kepha akudingeki ulwe wedwa. UNkulunkulu uzokusiza.
Lokhu bekulokhu! Sithemba ukuthi le ndatshana ikusiza ukuthi uqonde ububona kanjani ubudlelwano obunodlame nokuthi kufanele uziphathe kanjani ngendlela yobuKristu kulesi simo. Uma manje ufuna ukwazi indlela yokukhulisa izingane zakho ngokwezinkolelo zakho zobuKristu, qhubeka upheqa Thola.online.